चुनावी प्रचार टोली लक्षित गरी विप्लपले गराए ६३ बिस्फोट – Everest Times News
चुनावी प्रचार टोली लक्षित गरी विप्लपले गराए ६३ बिस्फोट
२०७४ मंसिर १९, मंगलवार १०:४०
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएपनि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लप’ माओवादीको सिक्वेल विस्फोट गराएको छ । पहिलो चरणदेखि दोस्रो चरणसम्ममा विप्लपले ६३ स्थानमा बम विस्फोट गराएको प्रहरीले जनाएको छ।
निर्वाचन प्रचारमा हिडेंका उम्मेदवारमाथि लक्षित गर्दै, चुनावी सभालाई लक्षित गर्दै विप्लप माओवादीले सिक्वेल शैलीमा नेतादेखि कार्याकर्ता, मतदातासम्मलाई आतंकित बनाइदियो । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधनमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गरेको कार्यक्रमसम्म विप्लपले बम पड्कादिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले बम पड्काएकोमा खेद प्रकट गर्दै विप्लपले राजा फर्काउन बम पड्काएको आरोप लगाए । बम पड्काउनेहरुप्रति आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुदैं उनले भने ‘बम किन पड्काको ? कहाँ पुग्न पड्काको ? ‘राजा ल्याउनु प-यो कि अब ?’
चुनावी सभाकै क्रममा १२ मंसिरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा भएको विस्फोटमा परी म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको मृत्यु भयो ।
दाङको तुलसीपुरमा भएको बम विष्फोटनमा घाइते भएका म्यादी प्रहरीको ज्यान गएको हो । म्यादी प्रहरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ का २३ वर्षका विनोद चौधरीको मंगलबार राति उपचारको क्रममा शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ।
बम विस्फोटनमा गम्भीर घाइते चार जनाको नेपालगञ्जमा र अन्य तीन जनाको राप्ति अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको तुलसीपुरमा भएको सभालाई लक्षित गरेर मंगलबार नचिनेका मानिसको समूहले गराएको विष्फोटमा अन्य आठजना घाइते भएका थिए ।
उम्मेदवार सख्त घाइते
एम्बुसमा परी १३ गते उदयपुर क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार नारायणबहादुर कार्की घाइते भए । कार्की हाल महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन् । विस्फोट हुँदा उम्मेदवारसहित सात जना घाइते भएका छन् ।
उदयपुरगढी गाउँपालिका ९६० मा बम विस्फोट हुँदा उदयपुर क्षेत्र नं। २ का कांग्रेस उम्मेदवार नारायणबहादुर कार्की गम्भीर घाइते भएका छन् । कार्कीसँगै अन्य दुई जना गम्भीर घाइते भएका थिए ।
कार्की निवर्तमान सांसद हुन् । २०७० को चुनावमा विजयी भएपछि उनी सांसद बनेका थिए । बम विस्फोट लगत्तै उद्धारका लागि प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको र उद्धार गरी घाइते भएका उम्मेदवार कार्कीलाई उपचारका लागि हेलिकोप्टरबाट सिधै काठमाडौं पठाइएको थियो ।
गगन थापालाई छर्रा
चुनावी प्रचारका लागि चपली पुगेका गगन थापालाई लक्षित गरी बम प्रहार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनका सहयोगीहरुका अनुसार उनको टाउकोमा छर्रा लागेकाे थियो। आफूमाथि भएको बम प्रहरबारे प्रतिक्रिया दिदै थापाले आफ्नो निर्वाचन कार्यक्रमबारे पूर्ण जानकार भएको व्यक्तिले नै बमप्रहार गरेको बताए।
बम प्रहर भएको एकैछिनमा उनलाई शिक्षण अस्पताल भर्ना गरी उपचार गराइएको थियो।
विस्फोटमा परी थापासहित जयराज लामिछाने, राजकाजी श्रेष्ठ, ध्रुव खड्का, पूर्णबहादुर श्रेष्ठ, रेणु बरुवाल, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, रविन्द्र कार्की, काशीलाल श्रेष्ठ, परशुराम थापा र सुमन खड्का घाइते भएका छन्।
मुश्किलले जोगिए महत
कांग्रेस नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले मुश्किलले ज्यान जोगाए । नुवाकोट १ का उम्मेदवार रामशरण महतको चुनाव प्रचार टोलीमाथि नुवाकोटमा बम प्रहार गरिएको थियो । चुनावी प्रचारमा जाने क्रममा ककनी गाउँपालिका–५ डाडाँगाउँमा मंसिर १ बिहान साढे १० बजे बम प्रहार गरिएको नुवाकोटका प्रहरी प्रमुख वीरेन्द्र बस्यालले जानकारी दिए ।
यसभन्दा अघि रोल्पामा वर्षमान पुनमाथि लक्षित गरेर पटक–पटक बम विस्फोट गराइएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता एवम् गोरखाका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्र दाङबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेवार बनेका कृष्णबहादुर महरा, रुकुमबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मामाथि लक्षित गरी निर्वाचन अभियानका क्रममा बम विस्फोट गराएको माओवादी केन्द्रले बताएको छ ।
भोजपुरबाट प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार बनेका एमाले नेता शेरधन राईमाथि पनि बम प्रहार भएको थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारमाथि लक्षित गरेर बम फिस्फोट गर्दै आएको विप्लव नेतृत्वको पार्टीले शुक्रबार नुवाकोटबाट प्रतिनिसभाका उम्मेदवार बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामहरण महतको ज्यानै लिने गरी बम विस्फोट गराएको छ। घटनामा परी पाँच जना घाइते भएका छन् । वाम गठबन्धनले उम्मेदवारमाथि शृंखलाबद्ध रूपमा बम विस्फोटको घटना घटाइँदासमेत सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ ।